जाडो मौसममा यौन चाहना - Nayabulanda.com
जाडो मौसममा यौन चाहना
नयाँ बुलन्द २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०६:५२ 97 पटक हेरिएको
काठमाडौं । हरेक दम्पतिको बैवाहिक सम्वन्ध सफल बनाउन यौन जीवनको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ । यसर्थ गर्मीमा त यौन क्रियाकलामका लागि वातावरणीय अवस्था प्रतिकुल नहोला तर जाडो मौसममा भने हरेक दम्पति यौन क्रियाकलापका लागि समस्या झेलिरहेका हुनु स्वाभाविक हो ।
जाडो मौसममा अधिकांश दम्पति यौन चिकित्सकलाई यस्तै प्रकारमा प्रश्न सोध्ने गर्छन् । यौन जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुने गर्दछ । त्यसैगरी कसरी लामो समयसम्म यौन सम्पर्क कायम राख्न सकिन्छ ? जाडोमा यौन सम्पर्क लागि कसरी नियमित राख्ने ? आदि इत्यादी ।
मौसम परिवर्तनसँगै मानिसको मानसिकता पनि बदलिन्छ । बैवाहिक जीवनमा पनि मौसमले बदलाब ल्याउने अध्ययनले देखाएका छन् । जाडो याममा मानिसको सेक्स चाहना गर्मीको भन्दा बढि रहने हुनाले रोमाञ्चक बनाउनु नव दम्पति लागि अझ आवश्यक नै हुन जान्छ । कतिलाई लाग्न सक्छ मदिरा सेवन गरेपछिको यौन क्रियाकलाप अझ रोमान्टिक हुनसक्छ । जाडोमा मदिरा सेवन गर्दा ज्यान तातिने र यौनसम्पर्कमा पनि मज्जा आउने मान्यता हुनसक्छ । तर यो बानी छ भने तुरुन्त हटाउनोस् । बरु प्यार, यौनजनित वार्तालाभ गरेर इमोसनमा आउँदा प्यार पनि बढ्ने र मज्जा पनि हुने विश्वास गरिएको छ । कामक्रिडा गर्ने बेलामा आफ्नो अनि पार्टनरको कपडाको विषयमा ख्याल राख्नोस् । नांगै वा कम कपडा लगाएर सम्पर्क गर्दा नरमाइलो हुन सक्छ । यसर्थ यति बेला कोठाको तापक्रमलाई पनि मिलाएर राख्ने गर्नुपर्छ । यौनक्रियाकलापको दौरानमा चिसो कम हुँदै गयो भने कपडा खोल्न सक्नु हुन्छ ।
जाडोमा हिटर बालेर हैन यौन साथीसँग यौन जन्य कुरा गर्नुस् वा हरेक उपाय र तौर तरिकाबाट पार्टनरलाई आनन्द दिनुहोस् । त्यसैगरी साँझ तातो पानीले नुहाउनाले पनि यौन इच्छामा बृद्धि हुने हुन्छ । जसले गर्दा तपाईँको थकान कम हुन जान्छ र सेक्सका लागि तयार हुन सक्नु हुनेछ भने यौन साथी सँगै नुहाउनाले दुबैमा यौन इच्छा बढेर जान्छ ।
यौनमा बढी आनन्द लिन खानपिनलाई पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी बेलुकीको खाना खाने बितिक्कै यौन सम्पर्क तिर हत्तारिनु हुँदैन । त्यसैगरी पार्टनरको इच्छा चाहनालाई ख्याल गरी गरिने सेक्स अझ रोमान्टिक हुन्छ । –विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट
दाम्पत्य जीवन र रोमाञ्चक यौन
६ महिनासम्म घाँस खाएर बाँचिन् हराएकी महिला !
प्रेमको चरम रूप नै यौन
महिनाबारी पछि कुन दिनको सेक्स सबैभन्दा सुरक्षित ?
आजको साहित्य (गजल)
तपाईँको यौन सम्पर्क कति लामो समय टिक्छ ?
महिलाहरूको चरम सन्तुष्टि
आमाहरुको बुढेसकालमा श्रीअन्तु पुग्ने रहर आमा समूहले पुर्यायाे
अचम्मको रोग, तीन बर्षीय बालकको जिब्रो मुखभन्दा चार गुणा ठूलो
कान्छा बाजेको ‘याराक्मा हौ सोल्टिनी’ गीतको भिडियो सार्वजानिक
इलामका थीर कोइराला गायिका अञ्जु पन्तसँग बिबाह गर्ने तयारीमा
केटीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ?
कागे गोल्डकप र मेला नहुँदा चार्डपर्वमा खल्लो महसुस
ईभाङ-चतुरे सडकको ३ सय मिटर कालोपत्रे, गुणस्तरीय कामका लागि खबरदारी
मानिसक सन्तुलन गुमाइएकी एक महिलाको दानाबारीबाट उद्दार
प्रेमीसँग तीन वर्षदेखि योजना बनाएर श्रीमानकाे हत्या
असार ७ गतेसम्म पाँचथरमा निषेधाज्ञा थपियो
७६ वर्षको उमेरमा अस्ताए ३८ श्रीमती र ८९ छोराछोरीका घरमुली
लागु औषध सहित इलामका चार जना पक्राउ
असार १ देखि तीन महिनासम्म सडक खन्न नपाइने,खनेको पाइएमा कारबाही
चिवाभञ्ज्याङमा निर्माण सम्पन्न बीओपी नयाँ भवन संचालनमा
पाँचथरमा नयाँ कारागार भवन बन्दै